17 May 2013 - Fante Online
Friday Sermon: Building of Mosques - An Ahmadiyya Priority - 17th April 2013 - Fante Translation.
Fida Nyamesɛmka: Esusuowketseaba 17, 2013.
(Friday sermon – 17th May, 2013 – Fante Translation)
ASƆR ADAN NE NSISII, AHMADIYYA NE DWUMADZI TSITSIR A OHIA NYƐƐ
Ɔkrantsee tashhud, tawwuz na Sura Al-Fatiha wiee no Hazrat Khalifatul Masi a ɔtɔdo enum (Allah mfa mboa kɛse nhyɛ no dzen) sanee Krantsee Sura Al Tauba ne nyiyimu duawͻtwe a ɔyɛ Kuran Krɔnkrɔn no ne tsir akron no.
Nyia ɔwɔ gyedzi wɔ Allah mu, Da a odzi Ewiei no, Ɔyɛ asɔr; otua ne Zakat (ebupɛn) na onnsuro biribiara ka Allah ho no, ɔno nkotsee na obodtum ahwɛ Allah N’asɔrdan wɔ tsebea a oyie na ɔyɛ prɔmprɔm mu; dɛm ntsi woyinom na wͻbɛka nkorɔfo a wodu ewiei pa no hɔnho. Ɔnam Nyankopɔn N’adom ntsi, ndɛ da yi, Ahmadiyya Asɔrmba a wɔwɔ British Columbia enya adom ahoɔdzen dze etum esi asɔrdan. Ahmadiyya ebusuakuw binom agye ntaa wɔ ha mfe eduanan a abɛsen kɔ anaaso bɛyɛ mfe eduonu anaa eduasa na mbrana hom etum esi asɔrdan dɛm ber yi a. Ehyiadzibea wɔ ha dada eso asa kɛse bi a wɔyɛ asͻr no wohyia wɔ hɔ; iyi nye siantsir a hom enntum enntu homho amma ennsi asɔrdan ankasa wɔ ha no.
Ɔyɛ a ɔbɛyɛ dɛ, obehia dɛ wodzi ehyia wɔ beebi, na asɔrmba hɔn ntsetsee wotum yɛ, mbom asɔrdan wͻ noara noho hia na ne mfaso. Ahyɛnsew a osisi asɔr dan no do na mbrɛ ne yɛbea tse no ma asɔrmba no nya enyigye soronko; dɛmara so na dza etwa ehyia asɔrdan no ho no so gye enyiwadofɛw ma nkorɔfo nkaa no so.
Bea a asɔrdan wɔ no, akwan horow a wɔnam pii mu. Dɛm saso ntsi na Anohoba Masia no atwe hɛn adwen egyina do pɛpɛɛpɛ wɔ asɔrdan ne nsii do na ɔnam dɛm kwan yi do na asɔrba hɔn koryɛ bɔkɔ do na dawurbɔ a ɔfa no Islam ho no so atrɛ, Ɔyɛ nopkwan dɛ Ɔaka dɛ ɔmmfa ho dɛ ɔmmfa ho dɛ asɔrdan no nnyɛ kumkumfi na ɔnnyɛ nwanwa mbom ddza ohia ara nye dɛ ɔaka dɛ ɔmfa ho dɛ asɔrdan no nnyɛ kumkumfi na ɔnnyɛ nwanwa mbom dza ohia ara nye dɛ wobesi asɔrdan.
Obinom bɔdwen dɛ ebɛn hia na ɔbɛma yeesi asɔrdan kontaan, nkanka ber yi a nkorɔfo pii upper eenya asɔrdan wɔ hɔn asetsena mu yi, Binom nnyi ahoɔndzen a wobotum esi, ntsi wɔtow mona asɔr yi ne stir dɛ ɔnkɔ hɔn mboa. Dɛm ntsi adwen bi bɛba dɛ sɛ wosi asɔrdan nkumakuma a nna ɔkyerɛ dɛ wɔdze sika no ara besisi asɔr adan pii. Mbom sɛ yɛdwen mbrɛ asɛmpͻw yi tse a nkyɛ dɛm adwen yi nnkeyi n’enyim; ɔfa no dɛm adwen yi ho no Nkɔmhyɛ nyi (NNN) akasa afa ho dɛ: “Inna mal a’maalo bin-niy-yaat”: n’asekyerɛ nye dɛ: dwumadzi biara n’akɔntua gyina siantsir a ɔtaa ekyir.
Vancouver yɛ kurow a ɔso sen kurow biara wɔ British Columbia na ha na Ahmadiyyafo hɔn dodow wɔ na sɛ yɛhwɛ dodow a wɔwɔ hɔ a nna hɔn asͻr dan no nnyɛ kɛse biara. Na sɛ yɛhwɛ Nyankopɔn Ɔkɛsefo no n’adom na mbrɛ akwan a wɔnam do dze Islam Ahmadiyyat repetse no a, hɔn so rohwehwe dɛ hͻn mbeambea wɔ dɛ ɔtrɛ ɔnam Anohoba Mɛsia (ANN) nyikyerɛ “was-say a makanaka” a Nyankopɔn kyerɛɛ no kwan dɛ ɔntrɛ ne fie mu na ɔmma kwan nda mu. Dɛm nyikyerɛ yi nnkyerɛ dɛ yɛmma hɛn efiefie mu mbaa ama nkorɔfo a wɔbɛba Jalsa anaa abaserɛ hɛn no eenya beebi dze hɔn tsir ato, mbom yehia dɛ hɛn asɔndam so no mu trɛtrɛ yie.
Afei, ber a yɛwɔ mu yi, Nyankopɔn ama Anohoba Mɛsia (ANN) dzin bi dɛ “Ibraheem” na ɔnam Hadhrat Ibraheem (an) do na Nyankopɔn sii Khana Ka’aba. Ɔnam dɛ Nyankopɔn No koryɛ abɔbɔ adze no ntsi Nyankopɔn Ne dan a odzii kan sii ama wɔasom No wɔ mu ntsi, ofi ber to ber wɔnam Hadhrat Ibraheem (AN) do si no fofor na wosiesie no.
Na ɔnam Nyankopɔn N’anohoba do ɔnam Anohoba Mesia do wiadze bɛba ebohu ampaara woruhu so, na ekyingye biara nnyi iyi mu dɛ Islam ne nkyenyan bɛba a ɔnam Anohoba Mɛsia (ANN) do. Na, wɔ sunsum mu no, wɔ hɛn mber yi mu, botae a wɔdze sii khana ka’aba no ͻnam Anohoba Mɛsia (ANN) bɛhyɛ ma na wiadze bɛba ebohu na wɔahwɛ no botae a ɔnam do ma wosi asɔrdam nye dɛ nyimpa wɔ dɛ wɔboa hɔn ano som Nyankopɔn kor no na wɔnam dɛm siantsir yi so do ɔwɔ dɛ yɛka kɔ asɔrdan ne nsii ho.
Dɛm ntsi, dɛ mbrɛ mekaa no, adze pɔkyee nye dɛ, dɛ mbrɛ Nkɔmyhɛnyi krɔn kyerɛɛ no, nye pɔw a ɔda ndzayɛɛ no ekyir, na hɛn pɔw nye dɛ yɛbɛma Nyankopɔn No koryɛ etsim na yɛatrɛ N’asɛm no na yɛaboaboa dɔm a hɔn dodow twa mu kɔ Ne frankaa Nkabɔmu no na koryɛ no ase, na yɛdze nsakyer ba hɛnara hɛn ndzeyɛɛ mu ama hɛnara ɔnye hɛn mba aabɔ hɛn mu adze wɔ Nyankopɔn enyin. Ɔwɔ dɛ yebɔ mbͻdzen biara ma Salat (Asɔryɛ) tsim na yɛhyɛ asɔrdan no amaama ɔnam dɛm botae yi ntsi ama ayɛ dɛ gyama asɔrdan no yɛ nkumankuma.
Dɛm ntsi, sɛ iyi yɛ hɛn adwen a, nna asɔradan a wɔyɛ dɛ wɔyɛ akɛse no annyɛ dɛ apɛbiakyerɛ na mbom wɔsosoe dɛ wɔrenya Nyankopɔn Ɔkɛsefo no N’enyigye, na ɔyɛ Nyankopɔn ne pɛ a mowɔ awerɛhyemu dɛ hom a wɔtse apaa yi mu a wɔrebɛhyɛ asɔrdan yi ma yi, sɛ hom dze adwenpa yi ridzi hom ahyɛdze do a ɔno ber a hom bedzi nyim dɛ wɔrepetse Islam Ahmadiyya asɛm no, ber no ara so worutu mpon wɔ sunsum mu na wɔreka hom mba abɔ mu wɔ Nyankopɔn kor no mu yi, hom nye nkorɔfo a hom botu hom mba mpon wɔ hɔn bra wɔ wiadze yi mu ɔnye owu ekyir. Hom so benya Nyankopɔn N’enyigye na hom eehu Nyankopɔn N’adͻyɛ dɛ edwir hom do. Na sɛ Nyankopͻn N’adom no hyɛ ase dɛ orudwir nkorͻfo do wͻ ber a hͻn tsirmupͻw nye dɛ wobenya Nyankopͻn N’enyigye no a, afei kurow biara Nyankopɔn dom hɔn ahoɔdzen wɔdze si asɔrdan pii.
Dɛm ntsi, hom tsirmupɔw wɔ dɛ ɔyɛ dɛ yɛnnkɔtweͻn ma mfe eduasa anaa eduanan ansaana yɛesi asɔrdan ɔka do no, mbom yɛakɔ do ara dɛ yɛbɛyɛ iyi na asɔrdan pii a ɔtse dɛ iyi ne saso a wobesi ma ayɛ ketseketse a asɔrmba kɔ mu a ɔbɛyɛ ahokyer. Sɛ yɛhyɛ asɔrdan ma, dɛ yɛrehyɛ ehiadze a wɔdze som Nyankopɔn no ma a, na yɛnam N’akwankyerɛ do dɛ yɛrefa Ne nkyerɛkyerɛ abɔ hɛn bra yie a, yɛbɔkɔdo ara ehia dɛ yɛtrɛ hɛn asɔrfi wɔ kwan a yɛbɔtwe Nyankopɔn Ne nhyira pii na yɛanya iyi so kwan a dabiara yɛbenya Nyankopɔn N’adom no mbordo mbordo.
Dɛm ntsi, sɛ yɛdze dɛm tsirmupɔw yi repa Asɔrfi yi ho tam a nna ampaara yɛrobɔ mbɔdzen dɛ Asɔrfi mber pii nna yennsii na afei dze yɛesi. Na mbeambea no a seiseiara so wonsi asɔr wɔ hɔn no, hɔnom so, yɛrepa dɛm asɔrfi yi ho tam yi, wɔretwe hɛn adwen egyina dɛm dwumadzi a ohia yi do na ɔakyerɛ dɛ mber pii twaa mu ansaana hom risi asɔrdan yi. Aber biara hom nkaakaa, dɛ mbrɛ m’aka dada no dɛ nsɔrfi wɔ nonkasa ne hia a ohia na ne mfaso na asoɛe pii na asɔrfi ho asoɛe ɔnye asakɛse nnkotum eenya gyinabew a asɔrfi nya.
Ampa ɔyɛ nokwar dɛ asakɛse anaa asoɛe ma Asɔrmba beebi ma wohyia dze, naaso sunsum mu nkitahodzi a obi nya no dɛ ɔkɔ asɔrfi mu no na nkanyan a ofi mu ba no; iyinom nnkɛba wɔ ber a asɔrfi papa nnyi hɔ. Iyi yɛ nyimpa ne bɔbew mu bi. Sɛ ebɛpen do a. Ntsi asaase biara a wɔatɔ no, hom nsi asɔrfi papa kyɛn dɛ wobesi ehyiadzibea na asoɛe. Metsee wͻ Canada dɛ wͻwͻ asaase bi a wͻadwen ho dɛ wͻdze sika a wͻwͻ no besi ehyiadzibea, mbom medze ndaase ma Nyankopͻn, Ɔkɛsefo No dɛ wͻsesaa hͻn adwen ber a wͻkaa kyerɛɛ hͻn dɛ wͻnkͻ asɛm no mu mprenu no no. Nyankopͻn nhyira mbea mbea no a wͻrodwen ho dɛ wobesi asͻrdan no dɛ wobotum esi.
Ɔyɛ nokwarsɛm dɛ susuampaara dɛ wosisi asͻrdan no dze nna akwan afofor ebue a wͻdze Islam Ahmadiyyat Asɛm kͻ mbeambea. Ebͻw bosom n’ewie no me paa asͻrdan no a ͻwͻ Valencia, Spainman mu no ho tam na nsɛm a me nsa aka kyerɛ dɛ hͻn a wͻnnyɛ Muslimfo rebisabisa Islam ho nsɛm, afei so, hͻn a wͻnnyɛ Ahmadiyya Muslimfo ba bɛyɛ asͻr wͻ hͻ na wͻnya Jama’at ho nyimdzii. Ɔyɛ Nyankopͻn Ne pɛ a hͻn a wͻfi dɛm nkorͻfo yi mu a wͻdze tseneneeyɛ ehyira hͻn no, akra a woehyira hͻn no wͻbɛma hͻn ahoͻdzen ma wͻagye Islam Ahmadiyya asɛm no ato mu ma wͻaba hɛn mu.
Dwumadzi a Allah, Ɔkɛsefo dze ahyɛ Anohoba Mɛsia (ANN) no dɛ onndzi kor nye dɛ wɔbɛma Muslimfo no atse Islam ho nokwar nkyerɛkyerɛ no na wɔaboa no wɔ Islam no a Nkɔnhyɛnyi Krɔnkrɔn Muhammad (NNN) dze abɔbɔ adze no na Sharia (Mbra) no a wɔada no edzi akyerɛ no wɔama ako do. Allah, Ɔkɛsefo no, nam nyikyerɛ do akyerɛ Anohoba Mɛsia dɛ: “Boaboa Muslimfo nyinara a wɔwɔ wiadze yi mu kɔ Nokwar Som no ho”. Anohoba Mɛsia rekyerɛkyerɛ mu no ɔkaa dɛ: Dɛm kasa yi dɛ me mboaboa Muslimfo a wɔwɔ wiadze yi, yɛ nhyɛsɛm soronko. Afei ɔdze Hadhrat Abraham (ANN) dze reyɛ mfatoho no Anohoba Mɛsia (ANN) no kaa dɛ Allah hyɛɛ ogya ma ɔyɛɛ wirekuku ma no dɛ ɔrobɔ no ho ban na dɛm ara so aba, dɛm ntsi dɛm nhyɛsɛm yi yɛ me dɛ mbrɛ Abraham (ANN) ne dze no tse noara.
Ɔyɛ Nyakopɔn Ne pɛ dɛ muslimfo a wɔwɔ wiadze mu wɔboaboa hɔn ano ahyɛ nokwar som kortsee no ase na iyi bɛyɛ hɔ na ampaara wɔbɔboa boa hɔn ano ayɛ kor. Mbom iyi nkyerɛ dɛ soronko nkɛba hɔn mu koraa. Nokwar, soroko bɛdeda hɔn ntamu na mbom ɔnkɛba no dɛ wonnkɔbu hɔn anaa wɔnnkɔbɔ hɔn dzin.
Dɛm ntsi ɔwɔ dɛ wonya kwankyerɛ ma hɔn nyinara. Hɔn a wɔyɛ Muslimfo na hɔn a wɔnnyɛ Muslimfo. Iyi fi Anohoba Mɛsia nkotsee do bɛba. Muslimfo mpenpem tse Ɔman na kurow yi mu na ampaara dɛm asɛm yi bɔtwe hɔn adwen so na dɛ asɔrfi yi ne nsii dze kasapa na dza ɔnyɛ nyinara fi Muslimfo na hɔn a wɔnnyɛ Muslimfo bɛba na iyi bobue akwan afofor ma wɔdze Islam Ahmadiyyat asɛm no apetse na ɔwɔ dɛ wɔyɛ ahoboa wɔ iyi ho. Dɛm ntsi asɔrdan yi ne sii bɛma ankorankor hɔn asodzii adɔɔso.
Ampaara sɛ hom boaboa hom ho dɛ wɔdze Islam Ahmadiyya asɛm no roto gua a, ɔwɔ dɛ ema wo bra ho tsew, eso itu mpon wɔ nyimdzii a ɔfa no som yi ho. Na iyi yɛ adzehiadze papaapa. Sɛ annyɛ iyi a na ɔnam wo nsɛm na wo ndzeyɛɛ a wɔnnsɛ ntsi obiara mmpɛ dɛ ɔbɛn wo. Dɛm ntsi asorfi ne nsii ma mbowbow buebue ma nkorɔfo ma Nyankopɔn ne nhyira no edwir hɔn do ama wɔadɔr gyedzinyi ne gyedzi mu aber biara. Na nyhira pii so wɔ hɔ a Kuw no twe ma noho ber a ogudo resisi asͻrdan a ɔtɔ bobor.
Allah akasa afa asͻrfi ho nsɛm pii wɔ Kuran Krɔnkrɔn no mu. Kuran Krɔnkrɔn no kasa fa obu na enyimnyam a ɔwɔ asͻrfi ho. Ɔkyerɛ asͻrfi no botae na suban a hɔn a wɔtaa kɔ Allah asͻrfi mu. Seisieara dze Kuran Krɔnkrɔn no mu nsɛm a mekenkan wɔ hom enyim yi ka hɔn a wɔtaa kɔ asͻrfi mu no ho nsɛm. Dza odzi kan a wɔkaa ho asɛm nye hɔn a wɔkɔ asorfi mu daapem. Woyinom na wɔgye Allah dzi. Mbom edze w’ano famfa bɛka dɛ egye Allah dzi nko nhyɛ ma. Gyedzi a wɔabɔ dzin wɔ ha yi wɔ gyinabew bi a Nyankopɔn abɔ dzin. Allah Ɔkɛsefo no ka dɛ sɛ hom bedzi dɛm gyedzi ho gyinabew yi a, ɔno hom nkotsee na wɔbɛkan hom aka hɔn a wodzi mu mapa wɔ hɔn gyedzi mu. Ɔnntse dɛm dze a hom gyedzi renndzi mu.
Sɛ yɛdze yɛ mfatoho a, Nyankopɔn Ɔkɛsefo no ka wɔ Kuran Krɔnkrɔn (49:15) dɛ “qaalatil a’raabo aamanna” n’ase nye dɛ “Arabfo no a wɔwɔ sar no do ka dɛ, ‘Yɛgye dzi’, mbom Allah ka dɛ “Qul lam to’minoo wa lakin qoolo aslamna” n’asekyerɛ nye “Ka ‘Hom nnyaa ngyee nndzii ana, mbom hom nka dɛ ‘Yɛagye Islam ato mu’”.
Dɛm ntsi Nyankopɔn kaa kyerɛɛ Nkɔnhyɛnyi (NNN) no dɛ ɔmma hɔn aso ntse dɛ mma wɔnnka dɛ wɔagye edzi mbom wɔnka dɛ wɔayɛ setsie, na iyi nam siantsir pii do. Dɛm saso ntsi, dɛ erese Kalima na erenya kankͻ wɔ wo gyedzi tsebea mu no, na nye Nyankopɔn ntamu nkitahodzi mu yɛ dzen na ema w’adwen kɔ wo som do, na aber biara ebɛyɛ krado dɛ edze woho bɔbɔ afɔr wɔ kwan biara mu ama enya Nyankopɔn enyigye no, na enam Ne mbransɛm nyinara do dze woho bɔ dɛm afɔr no : iyinom nye ndzeyɛɛ a nyia no a ͻ’agye Islam ato mu no wͻ dɛ ͻyɛ na ͻtsena gyedzinyi (momin), nokwar gyedzinyi mu no. Iyinom wͻdɛ ͻtsena onyia no a ͻ’agye Ber yi mu Imam no ato mu no, na ͻ’abɛyɛ Ahmadiyyanyi no, sɛ yɛrefa kwan bi so do aka asɛm kor yi ara a, yɛbɛka dɛ Ahmadiyyanyi wͻdɛ ͻfa ndzeyɛɛ fofor a otu huam do dze kyerɛ ne gyedzi adzekyee biara. Onyimpa wͻ dɛ onya dɛm atsenka yi wͻ no mu.
Anohoba Mɛsia (ANN) no kasaa faa iyi ho kaa dɛ agyedzifo (momins) nye hͻn a hͻn ndzeyɛɛ dzi dase wͻ hͻn gyedzi a ͻwͻ hͻn mu ho. Hͻn gyedzi wͻakyerɛw no wͻ hͻn akoma ho. Na dɛ wobenya Nyankopͻn N’enyigye no, nna ͻyɛ hͻn ehiadze papaapa na wͻma dɛm dzi hͻn adͻntsen wͻ biribiara mu. Na wͻfa Taqwa no kwan no a ͻyɛ fɛw opuwa no do, ͻnam Allah ntsi. Wͻkɛhɛn No dͻ no mu kusɛkusɛ. Na ͻbosom biara a ͻba hͻn akwan mu no dɛ ͻyɛ fintsindua, dɛ ͻyɛ ͻbrabͻn O! anaa mbrɛwyɛ anaa nhweasee O! wokotsir dɛm ndzeyɛɛ yi. Dɛm ntsi iyinom nye mpɛnpɛndo a ͻwͻ dɛ yɛfa na yɛdze hɛn enyi si do pɛpɛɛpɛ dɛ yebenya. Na sɛ hɛn nsa kã dɛm mpɛnpɛndo yi a nna yɛbɛyɛ dɛ hͻn a wͻfrɛ hͻnho dɛ wͻagye Nyankopͻn edzi no.
Anohoba Mɛsia (ANN) ne nkyerɛmu dɛ ͻwͻ dɛ yɛfa anamͻn kwan fɛɛfɛw na opua no a ͻyɛ Taqwa (tsenenee) kwan no, kyerɛ dɛ iyinom nye anamͻn kwan a ͻsɛ dɛ yɛyɛ Nyankopͻn N’edwuma a ͻyɛ nhyɛ ma hͻn no, na yɛyɛ ma N’abͻdze so na yɛdze hɛn nan na hɛn nsa nye honamdua ne fa bi ma Nyankopͻn Ne mbransɛm no. Ber a emma ho kwan ma wo nan anaa wo nsa nnyɛ bͻn anaaso ewurkadze no, ͻwͻ dɛ ebͻ mbͻdzen dɛ w’adwendwen ho bɛtsew ma efi efifidze biara ho; sɛ eyɛ dɛm wͻ som na asͻryɛ mu a, w’adwen nyinara begyina Allah do, Ɔno a Ɔyɛ Ɔkɛsefo na afei bedzi nkunyim wͻ Salat ne nyɛe ho.
Sɛ w’adwen kɛhyɛ wiadze na n’enyigyedze mu a ͻno nnkotum ama w’enyim etsim wͻ Nyankopͻn do wͻ w’asͻryɛ mu. Dɛm nyimpa yi, ͻda edzi pefee dɛ ͻreyɛ asͻr dze naaso n’adwen da beebi ara kwa. Ɔnam dɛm ntsi, Anohoba Mɛsia (ANN) no kaa dɛ hͻn a wͻkͻ do ara tsim wͻ Nyankopͻn No dͻ mu no, hͻn nye “mominfo”, nokwar agyedzifo no. Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn Muhammad (NNN) akyerɛ iyi mu dɛ gyedzinyi no su kor nye dɛ ofi Salat kor ne nyɛɛ kɛpem kor no, gyedzinyi n’akoma tsim wͻ asͻrfi mu. Dɛm nyimpa yi hyɛ ase dɛ ͻretweͻn dɛ ber bͻso ma ͻ’asan ayɛ asͻr bio ama ͻasan akͻ asͻrfi no mu bio akͻ sͻr.
Hwɛ, wiadze dwumadzi so hia ma nyimpa na Anohoba Mɛsia (ANN) esi no ewur aka akyerɛ hɛn dɛ, ofi Salat kor ntamu kɛpem kor no, onyia a ͻ’annyɛ n’ahyɛdze no wͻ nyiano yi. Ɔmmfa edwuma a ͻyɛ, sɛ ͻyɛ eguadzi O! apaadzi O! haban mu dwuma O! anaa edwuma biara. Dza ohia nye dɛ yɛbɛkaakaa Nyankopͻn wͻ ber a yɛreyɛ edwuma, iyi bɛma yeenya atsenka bi dɛ dza yɛreyɛ biara, yɛreyɛ no wͻ Nyame ntsi, na ͻbɛma yɛayɛ no wͻ pɛrpɛr nye nokwar mu. Dɛm ntsi, nyimpa yi nnkɛfa kwan bͻn biara do dze ayɛ edwuma no. Nyimpa yi ne wiadze mu dwumadzi so mpo bɛyɛ ne sunsum mu abrabͻ. Osiandɛ ber biara ͻwͻ n’adwen mu dɛ ͻreyɛ ahwehwɛ Nyankopͻn N’enyigye na ͻkaakaa no ber biara. Dza Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) n’esuafo no yɛɛe no nnyi hͻ dɛ yɛbɛtse no kɛkɛ dɛ ͻyɛ ͻyɛkyerɛ bi kɛkɛ. Wͻannyɛ dɛ yɛbɛkamfo hͻn ndwuma kɛkɛ bi. Wonnhia hɛn nkamfo. Nyankopͻn Noara akamfo hͻn na Wͻama hͻn abasobͻ krataa (certificate) dɛ Nyankopͻn enyi gye hͻnho. Hom nnhu dɛ obi a Nyankopͻn N’enyi agye no ho no, nnhia nyimpa biara ne nkamfo anaa ayɛyi.
Ampaara iyi ma hɛn awerɛhyɛmu dɛ sɛ yɛnantsew hͻn anamͻn mu na yɛfa hͻn su a na hɛn botae nye dɛ yɛrehwehwɛ Nyankopͻn N’enyigye a, ͻbɛma yɛaka hͻn a wͻfa N’enyigye kwan do no ho. Anohoba Mɛsia (ANN) ka dɛ, sɛ epɛ dɛ inya gyedzi gyinabew a ͻwͻ sor a, gyedɛ wo subanpa gyinabew kͻ sor. Na kwan a bɛfa do dze eker wo subanpa gyinabew nye dɛ, bͻhwɛ mbrɛ eyɛ wo ahyɛdze ma wo nuanom. Dɛm ntsi dɛ bɛyɛ asͻr nkotsee na ayɛ wo asodzii ama Nyankopͻn nkotsee no mma mmbɛn Nyankopͻn. Ɔyɛ gyedzinyi n’asodzii dɛ ͻbɛyɛ n’ahyɛdze a ͻda no do no ama bea biara a ͻwͻ. Na Anohoba Mɛsia (ANN) ka bio dɛ wonnyi enyihaw akwa osiandɛ enyihaw so tum twe wo fi Nyankopͻn nkyɛn. Mpɛn pii, hͻn a wonntum nnyɛ asͻr mpɛn enum da kor no me bisa hͻn a, dza wͻka nye dɛ ͻyɛ enyihaw na ͻyɛ hͻn. Enyihaw kor yi ara na wobu hͻn enyi gu Nyankopͻn No dͻ do na dɛm enyihaw nye enyimbungudo yi nkakra nkakra twe hͻn fi gyedzi ho kͻ ekyirekyir, na ͻma nyimpa no nnye atsɛmbuada ho suro, na ͻnnsuro dɛ da kor ͻbɛbu nkontaa wͻ Nyankopͻn enyim.
Iyi ntsi na Nyankopͻn aka dɛ Ɔyɛ hɛn a wͻgye Owusͻr dzi no suban dɛ mber nyinara wͻkͻ asͻrfi mu. Dɛm ntsi na wͻakyerɛ hɛn dɛ yɛbenya dza yɛyɛ ho wiadze yi mu ho akatua wͻ hɛn wu ekyir. Ndwuma a yɛyɛ wͻ Nyame ntsi dɛ yɛdze rohwehwɛ N’enyigye na yeenya gyedzi wͻ No mu wͻ asaase yi do na yɛdze hɛn ho bͻdͻm egyedzifo no, yɛbenya ho akatuapa wͻ ahenman mu. Na Ɔ’asan aka no bio dɛ, hͻn a wͻyɛ asͻr mpɛn enum da kor wͻ asͻrfi mu no so tua sika bͻ afͻr. Wͻ sɛɛe hͻn agyapadze dze hwehwɛ Nyankopͻn N’enyigye. Nyame N’adom ara kwa Ahmadiyyafo bͻ sika afͻr kɛse wͻ Nyame ntsi. Asͻrdan ne nsii mu no nyimpa dodow noara bͻͻ afͻr akɛse a ͻyɛ Dolla mpempem. Sɛ ͻba no asͻrfi ne si mu a, ͻno hͻn a wͻnnyɛ Ahmadiyya Muslimfo no so tum bͻ sika afͻr mapa anaaso Ahmadiyyafo hͻn ahyɛnsew nye dɛ wͻbͻ hͻnho mbͻdzen tua “Chanda” (bosom ntoboa) na wͻsan so tua ntoboa ahorow biara a wͻdze bɛbrɛ hͻn. Iyi na ͻma hͻn afͻrbͻ gyinabew tu kafo. Tsitsiriw mber yi wiadze ayɛ egyapadze aperaper yi na bio sikasɛm ho ayɛ dzen yi. Nyankopͻn nhyira nkorͻfo wͻabͻ dɛm afͻr yi na Ɔnyɛ hͻn egyapadze mbͻho mbͻho mma hͻn
Mepɛ dɛ metwe hom adwen gyina do dɛ papayɛ nkotsee nnkotum ama obi enya tsenenee gyinabew a otu kafo anaaso ͻma wo gyedzi kͻ kan. Nokwar nye dɛ momin me kyerɛ gyedzinyi dze ͻwͻ dɛ ͻyɛ no asodzi ma Nyankopͻn na N’abͻdze nyinara. Wͻ Kuran mu no, wͻakyerɛ egyedzifo hͻn suban nye abͻdzin ahorow pii a morobobͻ bi edzin yi ato no ho do ansaana yɛaka dɛ ͻnam kwan tsenenee do na wͻayɛ dza ͻfata dɛ ͻyɛ wͻ asͻrdan ho. Nyankopͻn Krͻnkrͻnyi No ka dɛ: “Na egyadzifo no dze wͻwͻ ͻdͻ a no mu yɛ dzen ma Allah” (2:166). Anohoba Mɛsia (ANN) no ka dɛ; ͻdͻ ne gyinabew a ͻwͻ sor papaapa nye ͻsom, dɛm ntsi na kasafua “muhabbat” wͻka ma Nyankopͻn nkotsee no. Afei ͻka bio dɛ som wͻ kyɛfa ebien. Kor nye dɛ bosuro Nyankopͻn dɛ mbrɛ ͻfata dɛ esuro No. na nokwar Nyamesuro dze nyimpa kͻ ahotsewee nsunyiwa ho, na ͻma ne kra nan na ͻpem kͻ Nyankopͻn Ne nkyɛn. na onya ahobrase mbordo mbordo. Iyi nye nyamesuro kyɛfa a ͻma nyimpa dze noho to hͻ dze n’enyim bͻ fa mu ma Nyame na ͻbͻ no ho mbͻdzen dɛ ͻbɛyɛ asodzi a ͻda no do wͻ Nyame nye nyimpa afamu nyinara.
Afei Anohoba Mɛsiah (ANN) no ka dɛ, kyɛfa a ͻtͻ do eb ien nye dɛ benya ͻdͻ ama Nyankopͻn dɛ mbrɛ ͻfata dɛ edͻ No, dɛm ntsi na Wͻaka no wͻ Kuran mu dɛ “Na egyedzifo no wͻ ͻdͻ a no mu yɛ dzen ma Allah” (2:166). Dɛ bobu wiadze afɛfɛdze nyinara egyangyandze na edze Nyankopͻn ayɛ wo botae na edze wo dͻ nyinara ama No. Iyinom nye ahyɛdze ebien a Nyankopͻn rohwehwɛ efi ͻdasanyi hͻ wͻ ͻnoara n’afamu. Dɛ mbrɛ yebotum edzi dɛm ahyɛdze ahorow ebien yi ho dwuma yie wͻ hɛn Nyame som mu no, ͻwͻ mu dɛ Nyamesom biara wͻ no su naaso Islam akyɛ dɛm ahyɛdze yi mu ebien. Osuro na ͻdͻ yɛ ndzɛmba ebien bi a ͻyɛ dzen dɛ obi benya abͻmu. Ɔbɛyɛ dɛn na obi a osuro obi no ͻbɛsan adͻ no? Naaso Nyamesuro na Nyamedͻ yɛ su soronko koraa. Mpɛn dodow a obi benya suro ama Nyame no, dɛm ara so na Onya ͻdͻ dze ma no. Dɛmara so na mpɛn dodow a obi bͻdͻ Nyame no, dɛm saso ara so na ͻbͻsuro No na wͻatwe no ho efi bͻn ho koraa na ͻdze no akͻ ahotsewee gyinabew mu. Dɛm ntsi iyi nye tsebea a ͻwͻ dɛ gyedzinyi (momin) biara kͻ mu.
Na Anohoba Mɛsia (ANN) kͻ do ka dɛ, sɛ obi benya suro yi a, gyedɛ ͻnam mpaabͻ do na sɛ obi benya ͻdͻ yi a, gyedɛ ͻnam Hajj ne nyɛe do, na iyi so yɛ kasapͻw tsentsen. Dza okesi ara nye dɛ nokwar gyedzinyi wͻ dɛ ͻhwehwɛ dɛm gyinabew yi. Dɛ mbrɛ ͻbɛma ne Nyamesuro atwetwe Nyankopͻn No dͻ. Sɛ obi nya dɛm gyinabew yi a, na oenya nokwar somfo gyinabew na ͻsomfo nokwarfo nye nyia yɛbotum aka dɛ odzi nokwar wͻ asͻrdan no n’aprͻwbͻ mu. Na dɛm gyinabew yi ara so na Anohoba Mɛsia (ANN) no pɛ dɛ n’ekyirdzifo nyinara nya.
Yeesi dɛm asͻrfi yi ewie yi, ͻwͻ dɛ yɛkͻ ho nsrahwɛ, na hɛn ara so yɛyɛ mpeͻpeͻmu wͻ hɛn abrabͻ mu na yɛhwɛ dɛ mpɛn ahen na yɛresom Nyankopͻn. Na ebɛnadze so na ͻkyerɛ dɛ yɛwͻ ͻdͻ ma Nyankopͻn? Na yɛnhwɛ dɛ ahyɛdze ahen na ͻda hɛn do a ͻwͻ dɛ yɛhyɛ no mã ma hɛnho hɛnho? Osiandɛ Nyamesom nndzi mu gyedɛ ogyina Nyamesuro do na yennkotum edzi iyi do gyedɛ yedzi Nyankopͻn Ne mbransɛm nyinara do. Nyankopͻn ama hɛn mbransɛm pii wͻ Kuran Krͻnkrͻn mu dɛ ͻdze rekyerɛ hɛn kwan na ͻyɛ gyedzinyi n’ahyɛdze dɛ odzi mbra nyinara do ansaana wͻafrɛ no ogyedzinyi mapa. Ansaana mebɛkyerɛkyerɛ iyinom mu no, ma menka asɛm kor bi wͻ Kuran nyinyimu a mekenkanee no mu “fa asaa oola’eka anyaqoono minal muhtadeen” [9:18] a asekyerɛ nye dɛ “Na woyinom na wobenya hͻn botae”.
Iyi kyerɛ dɛ, sɛ wͻyɛ iyi ara nna wͻakɛka hͻn a woenya kwankyerɛ no ho. Ɔnnkyerɛ dɛ sɛ wͻyɛ iyinom ara a nna woenya hͻn botae ara nye no, ͻnntse dɛm koraa. Obiara a onyim Arabic kasafua no nyim dɛ sɛ wͻka “asaa” (ͻbɛyɛ dɛ) n’asekyerɛ nye dɛ hͻn a wogyina pintsinn wͻ hͻn gyedzi mu na wotua Zakat na ma ͻkeka ho no dɛ wͻdze rohwehwɛ Nyankopͻn N’enyigye. Wonnsuro obiara kwetsir Nyankopͻn na woyinom nye hͻn a woenya akwankyerɛpa wͻ Nyankopͻn enyim na wͻnam Nyame No tum do benya gyedzi ntomu nye Nyamesuro ntomu. Na woyinom na Nyankopͻn kyerɛ hͻn kwan na wͻyɛ asͻr na wodzi Nyamesuro do na hͻn gyedzi tu kafo. Dɛm ntsi hͻn a hͻn tsir ayɛ ngogo nye hͻn a Nyankopͻn akyerɛ hͻn dɛ o’enya kwankyerɛpa na wͻyɛ Ne dze na wͻbɛn no aber biara.
Afei ma menkyerɛ hom asɛm kor anaa ebien bi a ͻyɛ asodzi a Allah dze ato hɛn do. Allah, Sorsor Hen No aka dɛ, “Hom nye nkorͻfo a hom dzi mu a woeyi ho mama adasamba hͻn yiedzi, hom kyerɛkyerɛ papayɛ na hom mbra bͻn na hom ngye Nyankopͻn ndzi” (3:11). Wͻ dɛm nyiyimu no mu no, wͻakyerɛ Muslimnyi nokwarfo no suban wͻ mu. Ɔnye dɛ, ͻkyerɛkyerɛ papa na ͻbra bͻn. Na iyi ronntum nnkͻ do wͻ aber a hɛn kasaa na hɛn ndzeyɛɛ nnyɛ kor. Sɛ hɛn ndzeyɛɛ nye hɛn kasaa bͻ ebira a, ͻno hɛn nsɛmkae biara rennya nsunsuado papa biara wͻ hɛnara hɛn nkorͻfo do na bi aka afofor a wͻwͻ nkyɛn. Asͻrdan yi a yeesi yi, bobuebuei akwan ama hɛn wͻ hɛn Nyamesɛmka mu naaso sɛ hɛn nndzeyɛɛ annyɛ dɛ mbrɛ ͻfata a, dɛ mbrɛ Nyankopͻn aka no a, nna yɛannyɛ nkorͻfo a wodzi mu anaadɛ hɛn gyedzi wͻ Nyankopͻn mu nnsi pi na hɛn asͻryɛ nnkɛyɛ mfaso, na hɛn sika afͻrbͻ nnkͻsͻ Nyankopͻn enyi, anaaso sɛ yɛka dɛ yɛwͻ Nyamesuro wͻ hɛn akoma mu a, ͻnnkɛyɛ nokwar. Dɛm ntsi ͻyɛ hɛn asodzii a odzi kan dɛ yɛbͻbͻ hɛn bra dɛ mbrɛ Nyankopͻn Ne mbransɛm akyerɛ no. ahyɛdze kor so nye dɛ “wa qoolo lin nasay husna” (2:84). Hom nye adasamba nkasa nye hͻn ndzi nkitaho wͻ adͻyɛ kwan do. Ɔwͻ dɛ yedzi kan kyerɛ dɛm suban yi wͻ hɛnara hɛn mu, tsitsir dzibewdzifo no wͻ dɛ wͻyɛ ahwɛyie wͻ iyi ho. Ansaana yɛbopue akɛka Nyamesɛm no ͻwͻ dɛ yedzi kan nya atseneneefo ma wͻhyɛ hɛn asͻrdan yi mã, hͻn a Nyame ntsi wͻyɛ hͻn asodzii pɛpɛɛpɛ wͻ hͻn Nyamesom mu.
Ɔtͻ fa bi a, menya sombo bi dɛ dzibewdzifo no bi ͻnye hͻn a wͻyɛ hͻn adwen dɛ wͻyɛ atseneneefo ara ma, dɛ wͻnye asͻrmba no bi kasakasa a, ͻma wodzi yaw wͻ hͻn akoma mu na wͻnam do dze pam nkorͻfo fi asͻr yi mu. Dɛm nkorͻfo yi, dɛ mbrɛ ͻwͻ dɛ nkyɛ wͻma dͻm bɛhyɛ asͻrdan yi mu ma no, mbom wͻma dͻm dan hͻn ekyir ma asͻrdan no. Dɛm ntsi sɛ yɛbɛyɛ nkorͻfo a wodzi mu dza a, ͻno ͻwͻ dɛ yɛsesa nya suban pa. Afei so, dɛ mbrɛ yesi asͻrdan a oye no, akwan ahorow bobuei ama hɛn wͻ Nyamesɛmka mu ma yɛabͻ Islam Ahmadiyya ho dawur, dɛm ara so na obesi wͻ ha. Dɛm ntsi sɛ dͻm no ba a, binom yɛ hom anyɛnkofo anaa ebusuafo a, ͻwͻ dɛ hom kyerɛ suban pa bi dɛ Ahmadiyyafo dze wͻyɛ adͻyɛ nye ndzeyɛɛpa ma nkorͻfo. Iyi nye dza ͻwͻ dɛ yɛyɛ wͻ wiadze afanandze nyinara kyerɛ dɛ yɛyɛ Ahmadiyyafo. Iyi nye Islam nkyerɛkyerɛ, dɛ yɛbɛper hɛnara hɛn yiedzi no, yedzi kan dwen dza ͻbɛboa nkorͻfo ana, na nnyɛ dɛ yɛbͻdwen kɛkɛ na mbom yɛdze bͻkͻ nyɛɛ do so.
Siesieara a yeesi asͻrdan yi, nkorͻfo pii bohu no mpɛn pii. Nyankopͻn ama hɛn akwanya ma yɛdze abͻ Islam Ahmadiyya ho dawur. Ɔtͻ ber bi a, nkitahodzi bi kͻ do a ͻnnyɛ nyimpa ne nsa ano edwuma, na hom bohu dɛ ha so bi besi. Dɛm ntsi hom ndua hom ndzeyɛɛpa do nye nkitahodzi do ntwe dͻm mbra ma wonya Islam nye ne nkyerɛkyerɛ ho dͻ. Dɛm ntsi dɛ mbrɛ m’edzi kan aka no, kwan a hom bɛfa do adͻdͻ homho wͻ Nyame ntsi dɛ edze rohwehwɛ Nyankopͻn N’enyigye. Ɔwͻ dɛ hom tͻ kͻ do yie, iyi bɛma yeetum abͻ som yi ho dawur na ama Kuw yi etum eyin na aboa hɛn ma yenya Nyankopͻn N’enyigye. Yɛnhwɛ dɛ yɛesi asͻrdan yi ewie yi, Jama’at yi beyin wͻ dͻm dodow mu ama asͻrmba no ayɛ nkorͻfo a wodzi Nyankopͻn Ne mbransɛm nyinara do na wͻahyɛ asͻrfi yi mã, na meserɛ dɛ hom mu kor biara benya akoma a aber biara ͻbͻtwe no akͻ asͻrfi dɛ mbrɛ Nkͻmhyɛnyi pɛɛ dze maa agyedzifo no. Meserɛ mpaabͻ dɛ asͻrfi yi bɛtwetwe Nyankopͻn N’adom ama obiara a ͻba dan yi mu no enya kyɛfa, na ma Nyankopͻn mbuebuei apon a hom bodua do abͻ Islam Ahmadiyya ho dawur wͻ asͻrfi yi ntsi.
Ma menka asͻrfi yi ho asɛm kakra. Annyɛ a nkyɛ ͻnnkɛyɛ ͻmanfo enyigye pii naaso hͻn a wͻrohwɛ fi wiadze afanandze nyinara no bɛpɛ dɛ wotsie nsɛm yi. Asͻrfi yi no ho nkaabͻ, Hadhrat Khalifatul Masih IV na ͻyɛɛ wͻ 1997. Na dɛm mber noara na ͻtoo no dzin Baitur Rahman. Osi asaasetam a ne kɛse bɛyɛ ‘acre’ 3.75 do a n’anan mu yɛ 33,419 footo. Ɔyɛ abansor a ͻtua do ebien na “dome” a ne tsentsen bɛyɛ footo 47 na “minaret” a ne tsentsen yɛ footo 76. Bea a mbanyin na mbasiafo yɛ asͻr no wͻ faakor na ne tɛtɛr yɛ footo 6800. Sɛ ekã mbaa na mbanyin hͻn bea no bͻmu a, nyimpa dodow bɛyɛ 1132 na wobotum ayɛ asͻr wͻ hͻ. Bea wͻ hͻ a tseaseanam bɛyɛ 140 botum egyinagyina. Dan kɛse bi so wͻ mu a nyimpa bɛyɛ 1,050 botum ayɛ asͻr wͻ hͻ na wͻayɛ nhyiamu na ma ͻkeka ho. Ntsi ekaka woyi nyinara bͻmu a nyimpa 2000 botum ayɛ asͻr wͻ asͻrfi no mu. Beebi a wͻdze nwoma gu, Nyamesɛm asoe, gyaadze, efunsiebea, skuul adan anan, ofise ahorow, nhyiamubea, ͻsͻfo no tsenabea na ahͻhobea, na woesiesie dan no ho fɛɛfɛɛfɛw. Asͻrfi no ho kaw nyinara kosii Canada Dolla ͻpepe awͻtwe na fã ($8.5 million). Nyankopͻn nhyira asͻrfi yi do mma hom nyinara.
Medze rokͻ ewie no, merebɛka Anohoba Mɛsia (ANN) ne nsɛm bi, ͻkaa dɛ:
“Asͻrfi ne fɛw nngyina n’afasin do na mbom ogyina no mu dͻm a wͻba bɛyɛ asͻr wͻ mu wͻ nokwar na ahobrase mu. Sɛ ammba no dɛm a, ͻda hͻ pan. Nkͻmhyɛnyi (NNN) n’asͻrdan no suar na wͻdze abɛ ne mpapã so na wͻdze kurii, na mber biara a nsu bͻtͻ no onwin gu asͻrmba no hͻn do. Mbom, mbrɛ asͻrfi no mu bɛyɛ hyew anaa nwin na mbrɛ ͻbɛyɛ no gyina asomfo no hͻn do. Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no aber do no, nkorͻfo bi a wiadze agye hͻn adwen no sii asͻrfi a ͻnam Nyankopͻn Ne tum do obubui. Dɛm asͻrfi no dze Masjid Zarar. Wobubuu dɛm asͻrfi yi. “Mosque” ho mbra kyerɛ dɛ, ͻwͻ dɛ wͻfa taqwa (tseneneeyɛ) do si asͻrdan.
Dɛm ntsi iyi na Ahmadiyyanyi biara wͻdɛ ͻdze hyɛ n’adwen mu. Anohoba Mɛsia (ANN) no kͻ do ka dɛ: Jama’at wͻ dɛ onya noara n’asͻrdan a Imam a ofi hɛnara hɛn Jama’at mu; otu fo na ͻma nkorͻfo akwankyerɛ na asͻrmba nyinara hyia yɛ asͻr wͻ asͻrdan yi ara mu. Nhyira pii wͻ Jama’at no mu na koryɛ na akasakasa ba ber a mpaapaamu esi mu. Na dɛm mber yi na nkabͻmu na koryɛ na wͻ dɛ wͻma do na nsɛm nketsenketse a ͻdze mpaapaamu ba no woyi no akwa.
Nyankopͻn mboa hɛn ma yɛmfa dza ͻwͻ dɛ yɛyɛ do mbͻ hɛn bra. Amen!